खबरदार ! सिके राउत फेरि नछुटोस, सरकार प्रतिको बिस्वास नटुटोस: महेश नेपाल - USNEPALNEWS.COM
- महेश नेपाल प्रकाशित मिति: February 3, 2017
पटक पटक पक्राउ पर्दै निस्किँदै गरेको देश बिखण्डनकारीको नाईके सिके राउत पुन पक्राउ परेको छ । यो खबर पाउने बित्तिकै सारा देशभक्त नेपालीमा खुसीको सञ्चार भएको छ । सारा नेपाली खुसीले गदगद भएका छन । बिखण्डनकारी सिके राउत पक्राउ भएपछी जनताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको जयजयकार गरिरहेका छन । बिखण्डनकारीको नाईके सिके राउतलाई पक्राउ गर्ने धनुषाका प्रहरी प्रमुख लिलामणी आचार्यलाई मुरी मुरी धन्यबाद साथै ३ करोड देशभक्त नेपालीको सलाम छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको सामाजिक सञ्जाल लगायत चौतर्फी रुपमा ब्यापक बिरोध भैरहँदा सिके राहत पक्राउ परेको छ । यो निकै खुसीको कुरा हो । सिके राउत बिहीबार दिउँसो जनकपुरको पुरानो बसपार्कबाट पक्राउ परेको खबर मिडिया हरुमा आएपछी म आफैँ पनि निकै हर्षीत भएँ । किनकी सिके राउतको बिरोधमा म आफैले पनी धेरै लेख लेखिसकेको थिएँ र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई च्यालेन्ज दिएको थिएँ सिके राउतलाई गोली ठोक्नको लागि । भलै सरकारले गोली त ठोकेन तर पक्राउ गरेको छ । म अब सरकारलाई अर्को चुनौती दिन चाहन्छु पक्राउ परेको सिके राउत फेरी नछुटोस, त्यसलाई जेलको चिसो छिँडिमा सडाईयोस र बुझाईयोस देश टुक्राउँछु भन्दा के अभिगत हुने रहेछ ।
अब सारा नेपालिको माग छ कुनै पनि बहानामा बिखण्डनकारीको नाईके सिके नछुटोस । त्यसको लागि हिरासत ज्वाईलाई ससुराली गएजस्तो नबनोस । यदी कुनै पनि बहानामा यो देशद्रोहीलाई छाडीन्छ भने सारा नेपाली आगो बन्नेछन र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पतन हुने छ । हामीले भुलेका छैनौं सिके राउतले नेपाल आमालाई रण्डी भनेको कुरा, तराई टुक्राउँछु भन्दै दिनदिनै भुकेका कुरा र हालसालै प्रहरीलाई सम्म झुक्याएर सिराहामा हजारौँ सोझा देशप्रेमी नेपालीलाई तराई अलग्याउन पर्छ भन्दै विशाल आमसभामा पढाएका कुरा ।
यो घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले उनको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । उक्त पत्र धनुषा प्रहरीलाई पठाइ पक्राउ गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । र अन्तत बिखण्डनकारीको नाईके जाकिएको छ हिरासतमा । केहि समय अघि मात्रै मधेशी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले कि भिम रावललाई जेल हाल्नु पर्यो कि हामी लाई हाल्नु पर्यो भन्दै उफ्रिरहेको हामिले बिर्सेका छैनौ । उपेन्द्र, राजेन्द्र र सिके हरुको कस्तो कनेक्सन हो आउट गर सरकार ।
पूर्व उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री भिम रावलले नेपालबाट तराई टुक्राउने खेलमा सिके राउतले भारतीय भूमिमा बसी शैन्य अभ्यास गरिरहेको सूचना प्राप्त भ​एको र बिषयको गाम्भ्रियतालाई ध्यान दिदै गृह मन्त्री र प्रधानमन्त्री लाई जानकारी गराएको कुरा समेत बाहिर आएको थियो । यस बिषयमा पनि गहिरीएर छानबिन होस सरकार । सिके राउतलाई त पक्राउ गरिस सरकार अब उसका आसेपासे छाउराहरुलाई नी एक एक गर्दै जेलमा जाकिदे र देखाईदे देश टुक्राउँछु भन्दाको परिणाम के हुने रहेछ भनेर ।
बिखण्डनकारीको नाईके भारतिय बफादार भुस्याहा सिके राउत जसले नेपाल आमालाई रण्डी भन्छ, जसले नेपाली नागरिकतालाई कागजको खोस्टा भन्छ, नेपाली पुलीसलाई फिरँगी भन्छ । आफू जुन देशको नागरीक हो त्यही देशको भुमी टुक्र्याउँछु भन्छ । त्यो बिखण्डनकारीको नागरिकता तुरुन्त थुत सरकार र तँ नेपालकै सरकार होस भन्ने प्रमाणित गरिदे । कतिञ्जेल त्यसलाई ज्वाईँलाईझैँ पाल्छस ? मिल्छ भने एउटा गोली खर्च गर ! जनताले तिर्नेछन गोलिको पैसा ।
हुन त जहाँको सरकार भारतिय बिस्तारबादीले दशगजा मिचेर मोटर बाटो बनाउँदा काममा अबरोध नगर्न आदेश दिन्छ । जहाँ कानुन नै मरेको छ । जहाँ मन्त्रीनै तस्करको नाइके हुन्छ, आफुलाई भुरा माछा भन्छ । जहाँं प्रधानमन्त्री नै भारतियको बफादार नोकरझै बन्छ । यस्तो सरकार सरकार संग आशा त कम नै छ तर पनी हाम्रो आग्रह छ सरकार तँलाई थाहा छ कस्को पावरमा हुर्किदैछ सिके ? हरेक सरकार किन डराउँछ उ संग ? यो सतिले सरापेको देशमा एउटा साधारण नेपाली नगरिकलाई लाग्ने कानुन देशद्रोहीको नाईके गद्दार सिके राउतलाई पनी लागोस ।
सरकार प्रमुख प्रचण्ड ज्यु ! हामीले बिर्सेका छैनौँ तपाइले जिउ हल्लाई हल्लाई ठोकेको भाषण । तपाईले भन्नू भएको थियो सिके राउतलाई जनताले कारवाही गर्छन भनेर । हो हामी जनता आतुर छौँ देशद्रोही सिके राउतलाई कारवाही गर्न । सरकार तीन करोड नेपालीको आग्रह छ सिके राउतलाई खुलामञ्चमा छाडीयोस जनताले कारवाही गर्नेछन र देखाउनेछन रण्डी भनेको के हो र आफ्नै मात्रीभुमी टुक्राउँछु भन्दा के उपहार मिल्छ भनेर । जय देश !!!